बिदेश जाने होइन, जाने मान्छेलाई रोक्ने सोच बनाएको छु : दिनेश | bethanchokkhabar.com
‘काभ्रेमा सिटामोलको अभाव छैन’ : सहायक सिडिओ सुनुवार
‘आर्थिक र सामाजिक स्तर उन्नती गर्नु नै संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो’ : प्रबन्ध निर्देशक चौलागाई
काभ्रे मालपोतमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु भोलीदेखी बन्द
मेसिनबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने
मकै उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रममा कृषकलाई सहभागी हुन पनौती नगरपालिकाको आग्रह
बिदेश जाने होइन, जाने मान्छेलाई रोक्ने सोच बनाएको छु : दिनेश
शनिबार, साउन २५, २०७६ | १६:४२:१७ |
कृष्ण श्रेष्ठ, प्रोप्राइटर
भिआईपी नेवारी खाजा र भिआईपी थकाली रेष्टुरेन्ट तथा हिमालयन अर्गानिक कफि बेकरी
नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागेको छु होटेल पाहुना घर । काभ्रेको बनेपामा आइसके पछि फुडिङको साथसाथै लजिङ बस्नको लागि बनेपामा त्यती प¥याप्त मात्रामा छैन भन्ने जुन जनमानसमा छ त्यसलाई चिर्नको लागि बनेपामा भिआईपी नेवारी खाजा र भिआईपी थकाली रेष्टुरेन्ट तथा हिमालयन अर्गानिक कफि बेकरीको सफलता पछि बनेपामै सुविधा सम्पन्न र स्तरीय लजपनि छ है भन्ने सन्देश दिन बनेपा नगरपालिका पछाडी होटल भ्यू एण्ड पाहुना घर सञ्चालनमा ल्याएका छौ । जहाँ होटलको टपबाट बनेपा बजारको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । उही कृष्ण श्रेष्ठ सँग गरेको कुराकानी :
० यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
– यो क्षेत्रमा सुरुवाती दिनहरुमा जागिर खाने माहोल थियो । भनेको बेलामा जागीर पनि पाई हाल्दैन थियो रजागीर पाईहाले पनि भनेको जस्तो आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने खालको तलव पाईदैन थियो ।त्यस वेलामा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जागीर नभएपछि त्यो बेला रोजगारको लागि जुन विदेश जाने माहोल थियो । यसै गरी म पनि एसएलसी सकिने बितिकै जागीरको लागि काठमाडौ छिरे र कामगर्न थालेँ ।काम गरे पनि आफुलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न धौँ धौ प¥यो । अनिमैले विदेश जानेसोच बनाए ।
त्यति वेला विदेश जानेको माहोल चलेको थियो, त्यसै सिलसिलामा म पनि दौडिरहेको थिएँ । मेनपावरमा धाउँदा धाउँदै धेरै भीड देख्थें, एयरपोर्ट जाँदा, पासपोर्ट लिनजाँद ापनि उतिकै भीड देख्थें ।त्यो भीड देखेपछि मेरो मनमा अब यो भिडलाई रोक्न मबाटै सुरु गछु भन्ने सोच पलायो । म विदेश जाने होइन कि विदेश जानेलाई रोक्ने सोच बनाएँ । रोक्न त रोक्ने तर मध्यम वर्गको मान्छे, किसानको छोरो के गर्न सकिन्छ त ?के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दा आफू पहिला होटल क्षेत्रमा काम गरेकोथिएँ, धेरै ठूलो काम त गर्न सकिँन्न तर सानो सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बनेपामा नोवारी खाजा घरको स्थापना गरें । जसमा भाइ, म र अंकल गरी ३जनाको टिम लगातार लाग्दै गयौं ।यसमा दिदीहरू र परिवारको पनि सकारात्मक साथ मिल्यो ।त्यसपछि मैले १÷२ जनागर्दै रोजगारीहरु पनि दिदै गएँ । त्यसपछि मैले के सोचें भने जागिर खाने होइन, जागिर खुवाउनुपर्ने रहेछ ।अहिले विदेशमा जाने जुनलर्काे छ, यसलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि रोक्नुपर्छ है भन्ने सोच आयो । किनकी मानिसहरु खाली नेपालमा रोजगार छैन मात्रै भनिरहेका हुन्छन् । एउटा शिक्षित देखि अशिक्षितव्यक्तिसम्मको मुखमात्यही नै आउँछ । छैन मात्रभनेर त भएन, किनभएन, हामीले खोजीगर्नु प¥योनि ।त्यसपछि मैले नेवारी खाजा घर सञ्चालन गरें । व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि मैले कर्मचारीहरु बढाउँदै गएँ ।
अहिले ५० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् र यसमा मलाई गर्व लाग्छ ।नेपाल सरकारले विदेश जाने रोक्ने रे, रोजगारी पनिदिन सक्नुप¥यो नि । रोकेर मात्रै हुँदैन त्यसले झन् विकृतिमात्रै फैलाउँछ । त्यो कुरालाई पनि मैले मन मालिएँ। जति पनि व्यवसाय छन्, मैले पनि कमाइ राखेको छु र यो नेपाल सरकारलाई पनि फाइदा नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । किनकी म जस्तो युवाले ४०÷५० जनालाई रोजगार दिइरहेको छु र म के सन्देश दिन चाहन्छु भने म जस्तै गरी अन्य व्यक्तिहरूले पनि यसरी नै सोच्ने हो भने हामी रोजगारीको लागि विदेश धाइरहनु परेन ।सबैले आफ्नो ठाउँबाट रोजगारीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु निकै आवश्यक छ ।
० सुरुवाती दिनहरु कतिको चुनौती पूर्ण रह्यो ?
– धेरै चुनौतीहरु पार गरियो ।मध्यम वर्गको व्यक्ति गाउँबाट आएको, यो ठाउँमा घुलमिल हुन धेरै संघर्ष गर्दै चुनौतीहरु पार गरियो । सुरुका दिनहरुमा पब्लिक रिलेशन पनि थिएन र आर्थिक पनि त्यति पहुँच थिएन । धेरै संघर्षहरु गरियो, ग्राहकहरुले गर्ने व्यवहारहरु राम्रै थियो । रामै गर्ने मान्छेको कहिले पनि नराम्रो हुँदैन भन्ने मनमाथियो र हरेस खाइनँ ।खाने मान्छेहरुले खाने र पछि थर्काएर जाने जस्तो प्रवृत्ति पनि थियो ।तैपनि मैले हार मानिनँ, एक दिन यी मान्छेहरुले पनि बुझ्छन् भन्ने विश्वास थियो । कतिपय साथीहरु बुझेर पनि बुझ पचाएर हेपाहा प्रवृति ल्याउँथे भने कतिपय साथीले हौसला पनि प्रदान गर्थे ।त्यही हौसला लाई साथ लिएर धेरै चुनौतीहरु पार गर्दै अगाडि बढें । जुनसुकै कामहरु गर्दा अवरोध त आउँछ नै तर अवरोधहरु पारगर्दै अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हो ।
० कामदार भएर कामगर्दा र अहिले आफ्नै व्यवसाय गरि रहँदा कस्तो अनुभुति पाउनु भयो ?
– यसमा म आफूलाई गौरवको महसुस गर्छु ।पहिला म एउटा रेष्टुरेन्टमा साधारण कर्मचारीको रुपमा काम गर्थें । त्यसबेला देखि नै मनमा के आउँथ्यो भने यो मेरो जिम्मेवारी हो, यो मैले गर्नै पर्छ भन्ने सोच्थें न कि यो अर्कैको काम भनेर सोच्दैन थेँ । यो काम सँगसँगै मैले राम्रो रिजल्ट पाउन ुपर्छ भन्ने मेरो मनमा लागि रहन्थ्यो । किनकी काम गर्दा काम मात्र सकाएर हुँदैन, काम गर ेपछि कस्तो रिजल्ट आयो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले मैले कामगर्दा सधैं म आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्थें । मैले जहिले पनि म आफ्नो कामको लेखा जोखा हेर्थें । कति काम सिकें, कति काम गरें र मैले साहुलाई कतिखुशी राखें सँगसँगै ग्राहकलाई कतिखुशी राखें र यसबाट मलाई कति सन्तुष्टि भयोत्यो पनि हेर्थें ।कहिले पनि यो काम अर्काको हो, अरुको लागि गर्दैछु भनेर मनमा आएन । सधैं यो मेरो हो, मलाई यो जिम्मा दिएको छ मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने मनमा राख्थें ।होटल लाइनमा लागे पछि यसको क्याटगोरी छ त यो सबैलाई समेट्नु पर्छ र म एउटा कुक भएर होटलमा गइसके पछि कुक मात्र होइन कि सबै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ । कुक भएर खाना मात्रै पकाउनु पर्छ भन्ने सोच रहेन, होटल क्षेत्रमा गइसके पछि म्यानेजर, अकाउण्ट, वेटर, कुक, हेल्पर, क्लिनर लगायत सबै कुरामा म नियाल्ने गर्थें । म पहिलादेखि नै धेरै यो पेशालाई चासो दिन्थें ।
० आफ्नो पेशाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– आजको दिनसम्म सन्तुष्ट नै छु । म आफु लगायत मेरो परिवार धान्न सकिएको छ र धेरैलाई रोजगारी दिन पाएकोमा खुसी लाग्छ जसले गर्दा धेरै परिवारको चुलो बल्न सहयोग मिलेको छ । र बनेपामा आएका जति पनि ग्राहकहरूलाई एउटै छाना मुनी विभिन्न परिकारहरूको स्वाददिन सकेको छु । त्यही कारण म यो पेशा प्रति सन्तुष्टि छु ।
० कामदार र साहुमा सजिलो कुन छ ?
– दुवै उस्तै हो । यदि कामदारले पनि यो काम मेरै हो भनेर गर्ने हो भने साहुलाई जतिकै गाह्रो छ ।होइन, यो मेरो ड्युटी हो, यति सकेपछि मेरो काम सक्यो भन्नुहुन्छ भने काम सजिलो छ, व्यवसाय गाह्रो छ । मैले यो यो काम गर्नु पर्छ, सिक्नु पर्छ भनेर चिन्तन ग¥यो भने माथिल्लो लेभल सम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुराको पनि चिन्तन गर्नु पर्छ । अहिले विभिन्न नयाँ नयाँ फुडहरु आएको छ, आधुनिक युग सँगै खानाको पनि नयाँ नयाँ परिकारहरू आईरहेका छन् । साधारण खाना पकाउन मात्र जानेर दक्ष कुक भइँदैन । जति नयाँ खाने कुरा बनाउन सक्यो त्यति नै तलब बढ्ने र मान सम्मान मिल्छ । व्यवसायी तर्फ पनिनिकै चुनौतीहरु छ । कामदारहरुलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने, घर भाडामा लिएका हुन्छौं त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र संघ संस्थाहरु सँग रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० होटल व्यवसायमा के कस्ता समस्या छन् ?
– अहिले सरकारको नीति हेर्दा समस्या मात्रै छ जस्तो देखिन्छ ।त्यो बाहेक अरु पनि धेरै समस्याहरु छन् र कामहरु आफूले सही ढंगले गर्न सकियो भने अवश्य सफल भइन्छ नै । भनेको जस्तो स्टाफ नपाइने, अलि अनुभवी, दक्ष कामदारहरु विदेश पलायन भई दिने, यस क्षेत्रको मुख्य समस्या रहेको छ । सरकारको अहिले नीति बुझि रहँदा व्यवसायमा केही असर परेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।
० यस सम्बन्धी संघ संगठनले सम्बोधन गरेको छ ?
– सम्बोधन गरिरहनु भएको छ । हामी पनि एउटा व्यवसायी मान्छे, हामी आफैं पनि व्यस्त हुन्छौं । हामीले मुखले भन्दा बढी हातले काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।उद्योग वाणिज्य संघ, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय संघले पनि सोचिरहनु भएको छ र तालिमहरु पनि दिइरहनु भएको छ । मार्केटले के मागिरहेको छ त्यो हामीले पनि खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ । मार्केटको मागलाई खोजीगर्ने कि, मार्केटलाई सेवा सुविधादिने कि, सरकारले ल्याएको नीतिलाई पछ्याउने ? यसमा हामी व्यवसायीहरु अन्यौलमा छौं । हामीसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले हामीलाई चासो दिइरहनु भएको छ । सरकारले पहिले नै सूचना दिएर नीति बनाएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।
० अन्त्यमा केही ?
– सम्पूर्ण ग्राहकहरुले मन पराइ दिनु भएको छ । एउटा नेवारी खाजा घरबाट सुरुवात गरे आज यो ठाउँमा पुगेको छु । ग्राहकहरुको मन जित्न सफल भएको छु । ५० जना भन्दा माथि कामदारहरुलाई रोजगार दिन सकेका छौं । यहाँ सम्म पुग्नु, यति उपलब्धी पाउनु भनेको ग्राहकहरुबाट नै हो । ग्राहकहरुले विश्वास गर्नु नै मेरो उपलब्धी हो । बनेपामा आइसके पछि कहाँगएर बस्ने भन्दा बनेपामै बस्ने सुविधा पायो । जुन खालको एउटा पाहुना घर सञ्चालन गरेको छुयसमा सानोतिनो मिटिङ हल, प्रोग्राम गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ । यहाँहरुलाई यहाँ स्वागत छ, हिजो जसरी माया गर्नु भएको छ, भोलि पनि त्यसरी नै माया गरि दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।
‘सदस्यहरुको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो’ : प्रबन्धक रानाभाट
‘सहकारीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा काभ्रेको मुहार परिवर्तन गर्नेछ’ : अध्यक्ष शर्मा
पुर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले योजना बनाएका छौ : वडाअध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ
बजारमा सिटामोलको अभाव भएपछि काभ्रे प्रशासनद्वारा औषधीमा पसलमा अनुगमन